‘मिस वर्ल्ड’ले कती कमाउँछन्, जान्नुहोस् ? - IAUA
‘मिस वर्ल्ड’ले कती कमाउँछन्, जान्नुहोस् ?
ramkrishna November 27, 2017	entertainment
भारतकी मानुषी छिल्लरले यो बर्षको ‘मिस वर्ल्ड’को ताज जितिन् । यो ताज जितेसँगै उनको चर्चा विश्वभरमा भैरहेको छ । १७ बर्षपछि भारतले यो ताज आफ्नो घरमा भित्राएको हो ।
तर, तपाइलाई विश्व सुन्दरी प्रतियोगीता जित्ने विजेताले कती पुरस्कार पाउँछन् भन्ने थाहा नहुनसक्छ । यो ताज जित्ने सुन्दरीले पाउने सबैभन्दा ठूलो पुरस्कार भनेको क्राउन नै हो । यो ताजमा हिरा र अन्य मुल्यवान पत्थर जोडिएको हुन्छ । यो क्राउनको मुल्य २ देखि ५ करोडसम्म पर्ने भारतीय मिडियामा उल्लेख छ ।
यस्तै, भारतीय मिडियाका अनुसार ‘मिस वर्ल्ड’ले नगद पुरस्कार १० करोड रुपैयाँ पाउँछन् । यी बाहेक, थुप्रै ब्रान्डबाट अफर, विश्वको हरेक देश घुम्न पाउँछन् । विश्व सुन्दरी भएसँगै भारतका सुन्दरीलाई बलिउडमा प्रवेश गर्ने सुनौलो अवसर पनि मिल्नेछ ।
Previous Previous post: बिरामीको भ्रम र औषधिको व्यापार
Next Next post: आफ्नो स्मार्टफोनलाई सधै नयाँ राख्ने ५ काइदा